उद्योग सङ्गठन मोरङको अध्यक्षमा प्याकुरेल - नेपालबहस
उद्योग सङ्गठन मोरङको अध्यक्षमा प्याकुरेल
१ चैत,विराटनगर । उद्योग सङ्गठन मोरङको अध्यक्षमा सुयश प्याकुरेल निर्वाचित भएका छन् । सुयश सहित १४ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । सङ्गठनको शनिबार सम्पन्न ४८औँ साधारणसभाले १७ औँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । अध्यक्ष प्याकुरेल सर्वसम्मतिबाट छानिएका हुन् ।
विसं २०२४ मा उद्योगी जुद्धबहादुर श्रेष्ठ संस्थापक अध्यक्ष भएर स्थापित सङ्गठनको कार्यसमिति १७ सदस्यीय हुने प्रावधान छ । कम्तीमा एक महिलासहित तीन सदस्य अध्यक्षले मनोनयन गर्ने छन् । कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रदीप मुरारका तथा उपाध्यक्षमा राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी र भोलेश्वर दुलाल एवं कोषाध्यक्षमा विपीन काबरा निर्विरोध छानिएका छन् ।
सदस्यमा सुरेन्द्र गोल्छा, सुदीप घिमिरे, तारानाथ निरौला, सौरभ शारडा, सुबोध कोइराला, इन्द्र खत्री राजन, पारस लनियाँ र सुनिलकुमार धनावत सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको सङ्गठनले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाद्धारा नागरिकलाई जस्तापाता वितरण २ दिन पहिले
तीव्र गतिमा फैलिदै कोरोना, आज १०९६ संक्रमित २ दिन पहिले
समाजमा बहिस्करणको त्रासले लुकाइन्छ कुपोषण ६ दिन पहिले
न पारदर्शिता न दुरदर्शिता, सधै कस्तो लाचारिता सरकार ! भन्दै बालुवाटारमा प्रर्दशन १० महिना पहिले
बजार वृद्धि हुँदा पनि किन भयो मैनवत्ति रातो ? हेरौ आजको बजार विश्लेषण ३ महिना पहिले